Fakantsary Fanarahamaso Nahitana Fiara Nandona Olona sy Nitsoaka Nahatonga Fanontaniana Hoe : ‘Maty Ve Ny Maha-olona Ao Delhi’? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Aogositra 2016 13:50 GMT
Aiza isika no tokony handeha? Tsy maintsy mandeha amin'ny arabe ny olona noho ireo fiara mijanona eny amin'ny sisin-dàlana. Sary avy amin'i Veeresh Malik tao amin'ny Flickr. New Delhi, India 13 Septambra 2014. CC BY-NC-ND 2.0
Lasa nalaza be ny lahatsary iray tamin'ny fakantsary fanarahamaso nahitana lehilahy iray nitsitra nihoson-drà nandritra ny adiny iray teo amin'ny làlana feno olona akaikin'ny fiantsonan'ny Metro Subhas Nagar ao New Delhi .
Tamin'ny Alarobia 10 Aogositra manodidina tamin'ny 5 ora sasany maraina, voadonan'ny fiara kodiarantelo mpanatitra ronono teo amin'ny sisin-dàlana iray raha an-dàlana hody any an-tranony rehefa avy niasa alina i Matibool 40 taona.
Nandeha mafy tamin'ilay làla-mangina ny mpamily ilay fiara ka nifaoka an'i Matibool avy any aoriana. Nidona tamin'ny andry ilay niharam-boina ary torana avy eo.
Mampiseho ilay mpamily nanatona an'i Matibool, ilay lehilahy nodominy, ny lahatsarin'ny fakantsary fanarahamaso nalefan'i Naresh VeeraSwarapu tao amin'ny YouTube, talohan'ny nitsoahany rehefa tonga saina izy fa naratra mafy sy baba ra ilay olona .
Nitsirara teo nandritra ny adiny iray mahery izy raha nandalo ilay lehilahy an-dàlam-pahafatesana ny fiara 140, fiara kodiarantelo 82 , mpitondra bisikileta 181 ary mpandeha an-tongotra 45 nefa tsy nisy namonjy azy.
Nahazo sary ny lehilahy iray hany mba nijanona ihany koa ny fakantsary.
Nampalahelo fa haka ny finday an'ilay niharam-boina fotsiny no nanaovany izany, ary lasa izy nandeha.
#Delhi , India. Tsy niraharaha an'i Matibool ilay niharam-boina voadona sy nitsoahan'ny mpamily ireo olona nandalo maherin'ny 200 nandeha an-tongotra. Nanome azy daka ny olona iray ary nangalatra ny findainy https://t.co/aiEIeh8jDR
Tamin'ny farany tonga ny famonjena kanefa maty noho ny fahaverezan-drà be loatra i Matibool nandritra ny fotoana nitondran'ny polisy azy tany amin'ny hopitaly tsy lavitra teo, .
Nisy hopitaly maro afaka namonjena an'i Matibool teo amin'ny manodidina kanefa maty izy noho ny fiandrasana adiny iray mahery.
Mitondra posy mandeha amin'ny herinaratra ilay niharam-boina amin'ny antoandro ary miasa ho mpiambina amin'ny alina.
Iza no namono an'i Matibool ? Ilay mpamily izay nandona SA ireo rehetra izay nahita azy ho faty fa nisafidy ny tsy hiraharaha sady lasa ? tamin'ny 8 ora maraina #DilliMeriJaan @927BIGFM
Mino tanteraka aho fa #matynymahaolombelona ao #Delhi , menatra ny Renivohitra aho tamin'ny raharaha #matibool, ny olona sy ny #fihatsarambelatsihiny #delhimampanahy
Nanoratra tao amin'ny Facebook i Shaffi Bulla:
Very ny maha-olombelona ao anatin'ny rotoroton'ny Paisa Paisa paisa (vola vola vola) … ..fifandraisan'ny olombelona
Nanao fanamarihana maneso momba izany ihany koa i Anupam Raj:
Eh mitsangàna ankehitriny! Manam-pahaizana manokana momba ny labozia Martsa isika ! Tsy kapoakantsika ny manampy ny olona !!
Nanoratra i Najeebullah M. Saidalavi nandritra izany hoe:
Iza no mangalatra ny finday an'ilay lehilahy maty? ilay devoly tenany.
Nanamarika i Pronit Roy Chowdhury fa tsy olana ao Delhi ihany izany :
Mahamenatra ity firenena ity, ary tena ratsy raha hanavahana an'i Delhi fotsiny ity horonantsary ity, mitranga amin'ny toerana maro izany ary tsy misy mitatitra. Mandria am-piadanana Matibool 🙁
Notazomin'ny polisy ilay lehilahy mpanatitra ronono niaraka tamin'ny fanampian'ny sary azo tao amin'ny lahatsary , raha mbola eo ampitadiavana ilay olona nangalatra ny findain'i Matibool izy ireo.
Nametraka ny fanontaniana mikasika ny làlana ho an'ny mpandeha an-tongotra ao Delhi ihany koa ny zava-nitranga.
Raha nandeha teny amin'ny sisin-dàlana i Matibool dia tsy voadonan'ilay fiara kodiarantelo. Matetika izany no foana noho ireo fiara mijanona sy ireo fitaovana fananganana trano ny sisin-dàlana ao Dehli na izany aza, .
Nanamarika ny mpi-Facebook Indiana fa mety ho antony mahatonga ny olona tsy hiraharaha ny nanjo an'i Matibool ny tahotra polisy sy ny rafitra araka ny lalàna Indiana. Nandroso sosokevitra ry zareo fa tsy nanao tatitra ireo mpitazana sy ireo mpandalo satria manahy sao mety ho voarohirohy amin'ilay heloka bevava noho ny zavatra hitany.
Hatramin'ny nahafatesan'i Matibool, nanambara hanangana drafitra hanaovana “tetika fandrisihana” amin'ny fanomezana valisoa noho ny fitondrana ireo niharam-boina ho any amin'ny hopitaly izay olona, anisan'izany ny mpamily fiarakaretsaka sy ireo posiposy misy motera, ny governemanta ao Delhi .
Nilaza ihany koa ny polisy fa tsy hisy ny fanohintohinana na fanerena hamoahana ny momba ireo Samaritana tsara fanahy.